Amahlakani kaGoogle aneRaspberry Pi yokuSungula uMncedisi oSebenzayo | Izixhobo zasimahla
Amaqabane kaGoogle aneRaspberry Pi yokuSungula uMncedisi oSebenzayo
UJoaquin Garcia Cobo | | Raspberry Pi
Uninzi lwethu sele sinezixhobo ezikrelekrele kumakhaya ethu ezilawula ezinye izixhobo ekhaya. I-spice yeAmazon Echo okanye iKhaya likaGoogle kodwa elungiselelwe wena. Abanye bakhetha ukuthenga izixhobo zabo kwiAmazon okanye kuGoogle. Nangona kunjalo ngoku kukho enye into enokwenzeka, esemthethweni, elungiselelwe kunye nesimahla.
UGoogle ujoyine iRaspberry Pi ekwenzeni iiprojekthi zeHardware yasimahla. Ke, bayile umncedisi wasekhaya onokuthi sizakhe kodwa oya kuba netekhnoloji kaGoogle kunye neRaspberry Pi.
Lo mncedisi ibizwa ngokuba yi-VoiceKit okanye ubuncinci ngolu hlobo ibizwa ngokuba yiwebhu apho siya kufumana lonke ulwazi ngesixhobo. Esi sixhobo sinomdla sinokuthengwa Ngokukhutshwa kwangoko kweMagPi.
I-VoiceKit ngumncedisi wokuqala wasimahla owenziwe ngokudibeneyo phakathi kukaGoogle kunye neRaspberry Pi
Eli phephancwadi lenziwe yiRaspberry Pi Foundation kwaye kwimagazini yokugqibela kuqhotyoshelwe ikhithi yokwakha yale ncedisi ebonakalayo, equka izinto ezinje ngebhodi yePi Zero W, izithethi, njl njl. Uyakwazi ukusebenzisa isoftware kaGoogle ukuze ube nomncedisi osebenzayo kwaye ngaphandle kweengxaki.
Okwangoku, ngokusebenzisa imagazini kuphela kwendlela yokufumana le khithi yokuncedisa. Kodwa le yinto esele yenzekile ngebhodi yePi Zero kunye neenyanga kamva saqala ukuyifumana kwiivenkile zeHardware zeLizwe. Kwelinye icala uGoogle ukuqinisekisile oko Le khithi yokuncedisa ayizukuphela kwento endiyisungulayo ngokusebenzisana neRaspberry Pi. Umdla wabo kwibhodi uyinyani kwaye baya kuqhubeka nokusungula iiprojekthi ezisemthethweni ngesoftware kaGoogle kunye nezixhobo zeRaspberry Pi.
Inyani yile yokuba iMagPi kunzima ukufikelela kwiivenkile zaseSpain kodwa kuyinyani ukuba neHardware yasimahla kunye neSoftware yasimahla, Singazakhela ngokwethu lo mncedisi Ngaphandle kwayo nayiphi na ingxaki, ewe, kufuneka sibe yindoda encinci ngenxa yokuba kufuneka sakhe ikhithi kuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Raspberry Pi » Amaqabane kaGoogle aneRaspberry Pi yokuSungula uMncedisi oSebenzayo
UDaniel boom sitsho
Kuyafana bade baqalise ukusebenza kwe-raspberry pi.
Phendula kuDaniel Bum
Ndincoma ukujoyina i-raspberry kunye neNgonyama 2. Ikhowudi ibhetele kakhulu kwaye sisiphumo esimangalisayo kwimifanekiso ye-3D
Umncedisi kaGoogle uza nesixhobo sasimahla seHardware kwi-SDK yayo
I-Edgybees izakuphucula izakhono zakho zokuqhuba iidrone 'ngomdlalo' olula